Mashiinada tolida duugga ah: sawiro, halka laga soo gato iyo in ka badan!
Mashiinnada tolidda ayaa markii ugu horreysay soo baxay sannadkii 1755. Dabcan, wakhtigaas. mashiinada harqaanka sida aynu maanta u naqaano, wax badan kuma ay lahayn kuwii aan guriga ku haysanay. Inkasta oo laga yaabo in qaarkood ay weli jiraan, waa gees ka mid ah saqafka. Waxay ahayd wax caadi ah in ay awoowayaasheen ay haystaan ​​ama ay weli haystaan.
Dhawr sano ka dib abuuritaankiisa mashiinka tolidda ayaa u muuqda mid aad u faahfaahsan waxaana mahad iska leh Ingiriis, Thomas Sanint. In kasta oo wakhti ka dib oo ay ku lug lahaayeen hal-abuurayaal badan, waxa loo yaqaan mashiinnada harqaanka ee duugga ah ayaa qaabaysanaya. Mid ka mid ah mashiinadii ugu horreeyay ee la patent wuxuu ka samaysan yahay alwaax wuxuuna lahaa irbad daboolan.
halka laga soo gato mashiinada harqaanka ee duugga ah
Haddii aad leedahay dixiri aad ku heli karto mid, tani waa wakhtigaaga. Shaki la'aan, mashiinada tolida ee hore waxay ahaayeen kuwo aad u adkeysi leh. Si la mid ah, in kasta oo aanay jirin wax toos ah oo ku saabsan iyaga, had iyo jeer waxay ahaayeen kuwo aamin ah oo qumman marka ay timaaddo dhammaystirka nooc kasta oo shaqo ah. Soo iibso mashiinnada harqaanka ee duugga ahMa aha inay noqoto wax adag. Maanta waxaan haysanaa internetka dhammaan kiisaskaas.
Dhinaca kale, waxaan leenahay bogga Amazon iyo dhinaca kale ee Ebay. Labada meeloodba waxaad ka heli doontaa labada nooc ee ugu caansan ee mashiinka dharka lagu tolo, iyo sidoo kale qaar ka mid ah qalabyada aad moodday inay lumeen. Haa, waxaas oo dhan waxay ku haystaan ​​dhowr qiimo aad u fiican runtii. In kastoo, aysan dhib lahayn in la sameeyo hubinno gaar ah oo ku saabsan cidda iibiyuhu yahay si uusan u helin nooc kasta oo cabsi ah.
Dabcan, dhanka kale, waad tagi kartaa kuwa wax aruuriya ama dukaamada qadiimiga ah. Halkaas waxa kale oo aad ka heli doontaa xusuustan quruxda badan. Si la mid ah, dukaamada rasmiga ah ayaa had iyo jeer leh mid ka mid ah sumcaddooda. In kasta oo ay had iyo jeer ka wanaagsan tahay in la weydiiyo ka hor sababtoo ah waxaa hubaal ah inay ku hayn doonaan meel ammaan ah.
meesha lagu iibiyo mashiinada harqaanka ee duugga ah
Haddii intarneedku u jiro in la helo oo laga iibsado shay, waxay sidoo kale diyaar u noqon doontaa inay iibiso. Haddaba, ma iibin kartaa mashiinada harqaanka ee duugga ah on portals kala duwan. Si fudud oo la mid ah dhigista xayeysiiska mid ka mid ah. Dabcan, marka ugu horeysa waa inaad wax yar ku sameyso cilmi baaris ku saabsan sifooyinka mashiinkaaga tolida. Wax kasta oo ka badan sababtoo ah shaki la'aan, waxaad u socotaa inaad waydiiso iyaga. Haddii aadan ilaalin buugaagta tilmaamaha, waxaa habboon in la isku dayo in la helo sifooyinka ugu muhiimsan ee isaga.
Sidoo kale, waa inaad ogaataa inaad hor istaagi doonto dhammaan hadhaagii. Markaa mar walba waa in sidaas loola dhaqmaa. Qaado sawirro leh iftiin wanaagsan iyo xag kasta, si aad sidan oo kale ugu qadarin karto quruxdeeda. Haddii intarneedku aanu ku siin kalsooni badan, waxaad had iyo jeer aadi kartaa dukaanka qadiimiga ah. halkaas way qiimayn doonaan oo waxay kuu sheegi doonaan qiime qiyaas ahaan waxa ay noqon karto. Haddii aadan ku qanacsanayn, ka dibna weydii ra'yi labaad.
Mashiinada Tolida Fanaanada Qadiimiga ah
in la hawlgaliyo mid ka mid ah mishiinnada harqaanka ee Fannaaniinta, waxaan u baahnay baallahaaga weyn. Mashiinka iyo isaga labaduba waxay ka mid ahaayeen alaab guri oo weyn. Taas awgeed, mid waa inuu ku fadhiistaa kursi aad u sarreeya, si ay cagtu ugu nastaan ​​baallaha. Lugta midig ayaa la dhigay geesta, sidoo kale dhanka midig ee badarka. Si ay ciribtu si fiican ugu tilaabsato. Halka lugta bidix ay dabooshay aagga sare iyo sidoo kale bidix ee badarka. Hab la isku daray oo aad awood ugu yeelan karto inaad u dhaqaaqdo sida la doono.
Marka badarku uu ahaa wax fudud, waa inaad xadhigga saartaa giraangiraha. Khiyaamadu waxay ahayd markii aanu ku talaabsanay baadelada, waxaanu sidoo kale siinay dhaqdhaqaaq yar oo ku socda duuliyaha iyo xaggayaga. Sidaa darteed, waxaa la hawl galiyay mishiinka dharka tolista ee Fannaaniinta. Mashiinadan ayaa la sheegay inay yihiin kuwii ugu horeeyay taariikhda. Haddii aad mid ku leedahay guriga oo aad rabto inaad ogaato sanadka uu ka yimid, kaliya waxaad u baahan tahay soo ogow lambarka taxanaha ah. Tan waxaa lagu qori jiray salka, giraangirta agteeda.
Haddii aad rabto inaad ogaato fanaaniinta guridda qiimaha mashiinka toliddaWaxaad ka heli doontaa xoogaa wax walba ah. Had iyo jeer waxay noqon doontaa arrin ku saabsan xaaladda ilaalinteeda iyo inay shaqeyso iyo in kale. Waxaad ku iibsan kartaa qiimo u dhexeeya 130 euro. Waxaad kor u qaadi kartaa haddii aad leedahay saldhigga iyo waxaas oo dhan, xaalad qumman, oo gaadhay tirooyinka gaaraya 500 euro. Qaar ka mid ah moodooyinka sida Singer 66 K waxay lahaayeen dahab ku dhammeeyey asalka madow. In kasta oo Fanaanka 99 K, ay hore u ahayd nooc koronto laakiin waxa ay sidoo kale lahayd kuwa dhammaatay. Wax haddi si wanaagsan loo xafido ay noqon doonto hadhaa.
Mashiinnada dharka Alfa ee hore
Sida Fanaanada, the Alfa mashiinada tolida duug ah sidoo kale waxay lahaayeen baallaha caanka ah. Markaa hirgelinteedu aad bay isugu dhawayd. Intaa waxaa dheer, in yar oo yar ayaa la soo bandhigay dhowr nooc. Si aad u badan oo shaqooyinkoodu sidoo kale way kala duwanaayeen sanadihii la soo dhaafay. Wax aad uga fiican dhammaan shaqooyinka tolida ee lagu samayn jiray guriga oo u oggolaaday dhammaystir dhammaystiran laakiin lacag yar.
In kasta oo ay Suuqa soo galeen Fanaanka dabadii, haddana waxa ay durbadiiba hoos u dhaceen iibkii. Waxay ahaayeen mashiinno adag oo adag. Waa in la ogaadaa in tilmaamaha uu lahaa tillaabooyin aad u fudud in la raaco. Wax la mid ahaa noocyada kale. Makiinadihii hore ee dharka lagu toli jiray ee Alfa, waxa aanu tirinaynay waxa aanu samaynayno iyo xataa kuwa nooca irbadda in aan isticmaalno. In ka badan wax kasta sababtoo ah had iyo jeer waxay ku xirnaan doontaa nooca dharka aan isticmaalnay.
Si kastaba ha ahaatee, aad bay u fududayd in loo helo qaybo ka mid ah alaabta. Laakiin ma jirin wax laga walwalo, sababtoo ah buug-tilmaameedka ayaa sidoo kale caddeeyay waxa la sameeyo xaalad kasta. Mashiinka alfa royale waxaa la arkay 60-meeyadii waxayna lahayd midab buluug ah oo canab ah. Alfa 482 wuxuu sameeyay midab isku-dhafan oo cad cad. Dhadhan kasta!. Sida qiimahooda, maanta, waxay aad ugu eg yihiin mashiinnada Fannaaniinta caadiga ah.
Mashiinada dharka ee Sigma hore
ka mashiinada tolida sigma guridda waxay ahayd mid kale oo ka mid ah guulaha waaweyn ee wakhti kasta. Waxay ahayd calaamad Isbaanish ah iyo dabcan, ma jiraan wax xaasidnimo ah kuwii hore, tan iyo xitaa qaabkeeda iyo dhamaystirka waxay la mid tahay. Waxay ahayd tol toosan, laakiin habkan ayaa sidoo kale noo ogolaatay inaan muujino dhammays guul leh. Sida caadiga ah, moodooyinka qaarkood waxay lahaayeen kiis bobbin zigzag ah, inkasta oo aysan ku jirin tolida noocaan ah.
Qalabka ayaa ahaa kuwo aad u wanaagsan oo la mid ah sida tusaalooyinkii hore. weli had iyo jeer waxaa lagula taliyey in la dufan iyaga marar badan. Sidan, waxaan ogaanay inay si ka sii wanaagsan u shaqeyn doonto oo aan lahayn kor iyo hoos u dhac yar.
noocyada mashiinka tolidda guridda
Hubaal waxaa jira mar walba qaar ka mid ah noocyada ugu dhawaaqa naga yaqaan si ka badan kuwa kale. Waxaa laga yaabaa in sababtoo ah mashiinada tolida ee hore ayaa horumaray iyo iyaga, sidoo kale mid kasta oo ka mid ah shirkadaha iyaga taageera. Kuwo kale ayaa ku dhacay dariiqa dhibaatooyin kala duwan awgeed. Si kastaba ha ahaatee, waxaa hubaal ah inaad weli xasuusan tahay inta ugu badan.
daanyeer: Sida aan horay u soo sheegnay, waa mid ka mid ah hormuudka ka ah mashiinka dharka. Kii ugu horreeyay wuxuu soo ifbaxay 1912-kii
Alfa: Waxaa la sameeyay 1920-kii sidoo kalena waa Isbaanish. Waxoogaa yar waxay soo bandhigtay waxyaabo cusub waxayna sii ahaanaysaa mid ka mid ah magacyada waaweyn ee la aqoonsan yahay.
Juki: The Xafiiska ugu weyn ee Juki wuxuu ku yaalaa Tokyo. Sannadku markuu ahaa 1947-kii waxay bilowday inay qayb ka noqoto mashiinnada dharka lagu tolo ee ugu caansan iyo kuwa guryaha lagu sameeyo. Dabcan, ka dib waxa ay sidoo kale fursad u siisay shirkadaha warshadaha.
Faaruuq: Haddii aan ka hadalno mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee Yurub, waa inaan ka hadalnaa Pfaff. Waxa ay shaqadeeda ka bilowday mashiinnada harqaanka adduunka ee 1862. Waxay ka yimaadeen Jarmalka. Midka hore waxaa lagu sameeyay gacan waxaana loogu talagalay in lagu tolo maqaarka kabaha..
Elna: Xarunteedu waxay ku taal Geneva, laakiin waxaa jira in ka badan 60 waddan oo ka faa'iideysan kara wax soo saarkeeda. The Mashiinnada dharka ee Elna Waxay jireen ilaa 1940. Midka ugu horreeya wuxuu ahaa mid is haysta oo koronto ah. Intaa waxaa dheer, midabkiisa cagaarka ah in yar oo ka jabay caaryada uu u bartay.
BrotherMid kale oo shaki la'aan gambaleelka garaaci doona waa Walaal. Shirkadda Japan ayaa weli leh tiro badan mashiinnada dharka lagu tolo oo waqtigooda la waafajiyay. Waxaa la aasaasay 1908 iyo 50-kii waxay bilaabi doontaa ballaarinteeda weyn. Ma garanaysaa moodooyinka hadda jira ee mashiinada tolida walaal?
Bernina: Shirkad la aas aasay sanadkii 1893-kii ee dalka Switzerland. The mashiinka tolida ee bernina Waxay ahayd tii ugu horreysay ee guriga waxayna soo muuqatay 1932.
cagihii hore ee mashiinka tolida
ka cagaha mashiinada tolida duug ah Waxay saldhig u ahaayeen. Waxay ka koobnaayeen baalle si siman u ballaadhan oo awood u leh inuu dhigo labada cagood. Sidan, maaraynta mishiinka ayaa xoogaa fududaan doonta. Intaa waxaa dheer, in laga sameeyo birta oo lagu daboolo alwaax, waxaan ognahay in aan la macaamileyno laba ka mid ah qalabka waaweyn.
Mararka qaarkood, xitaa wakhtigu ma dhaafin karo iyaga. Sidaa darteed, waxaa jira qaar badan oo iibiya qaybtan mashiinka. Inkasta oo ay kuugu muuqato mudnaanta wax aan macno lahayn, waa mid ka mid ah qaybaha ugu qiimaha badan. Waa maxay sababta?Hagaag, sababtoo ah waxaad siin kartaa macne cusub. Waxaad dib u warshadayn kartaa oo aad ka dhigi kartaa miis cusub ama hool. Waxaa jira fikrado badan oo soo bixi kara iyo inta badan kiisaska, iyada oo aan shaqo badan laga helin. Kaliya adoo isticmaalaya ciid ama varnish iyo rinji, waxaad si sax ah u heli kartaa. Waxaan had iyo jeer yeelan doonnaa xusuusta iyo taabashada canabka, taas oo aan aad u jecelnahay.
sawirada mashiinka tolida ee duugga ah
Ku raaxayso si fiican oo hore, oo leh meel aad u wanaagsan oo ay ku jiraan qaybo ururineed oo waaweyn oo kuwan oo kale ah oo aan ku tusinno.
Mashiinka dharka » Mashiinka Mashiinka Qadiimiga ah
18 faallooyin ah "Mashiinnada harqaanka ee duugga ah"
Janaayo 23, 2020 markay ahayd 7:33 pm
Hello... Waxaan haystaa mishiin duug ah oo lagu tolo. Hooyaday baa iska lahayd oo waxay ku jirtaa xaalad ilaalineed oo sii xumaanaysa. Xaqiiqdu waxay tahay in aan ahay sidii qof waalan oo meel walba ka eegaya si aan u ogaado calaamadda mishiinka damnaanka ah.
Ma arki karo wax calaamad ah oo u eg waxa aan "intuit" ee ydu noqon lahayd. Waxaan tan u leeyahay sababtoo ah ficil ahaan wax sawir ah laguma arki karo mashiinka, miiska birtana ma laha wax anagrams ah.
Astaanta waxa loo arki karaa wax la mid ah summada «antena 3 tv», haa, sida saddex qaybood oo cas, sida calaamadda silsiladda, iyo dhexda mashiinka tolida.
Haddii qof u eg yahay wax la mid ah, waxaan kuu soo diri doonaa sawirka haddii aad i caawin karto
Febraayo 6, 2021 markay ahayd 9:40 pm
Waxay noqon kartaa Alpha
Janaayo 25, 2020 markay ahayd 3:26 pm
Waxaan haystaa mishiinka tolida fanaaniinta 1961 waa maxay qiimaha
Abriil 24, 2020 markay ahayd 11:40 pm
Salaan, waxaan haystaa mashiinka tolida duugga ah oo leh sumad mudnaan leh, moodel 153 CF, waan tijaabiyay waana shaqeysay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado qiimaha uu noqon doono inaan iibiyo. Intarneetka ayaan ka baadhay qaabkaasna meelna kama soo bixin, mahadsanid
2-ka May, 2020 saacaddu markay tahay 6:58 pm
Hello, waxaan haystaa mishiin duug ah waana alfa.
Astaantu waa A oo ay ku dhex jirto mashiinka tolida. Ma garanayo inay ku caawinayso
Juun 4, 2020 markay ahayd 5:39 pm
Salaan, laba mishiin oo Alfa ah ayaa gacantayda soo galay, waxaan filayaa inay ka yimaadeen 50-meeyadii, ma aqaan moodooyinka, qof ayaa ii sheegi kara meesha aan ka heli karo buug-yaraha si aan u ogaado moodooyinka oo aan dhejiyo dhejisyada, mahadsanid salaan.
Oktoobar 2, 2020 markay tahay 4:00 pm
Waxaan haystaa mashiinka dharka lagu tolo ee CENTENARIO waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado qiimaha hadda uu yahay
Oktoobar 18, 2020 markay tahay 4:37 pm
Ma ogtahay haddii cabbirada saldhigga mashiinnada tolidda ay yihiin kuwo heersare ah ama mid kasta oo soo saaraha ahi uu lahaa cabbir u gaar ah?
Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado macluumaadka ku saabsan arrinta shirka ee alaabta hore ee alwaaxyada iyo sidayaal.
Febraayo 16, 2021 markay ahayd 9:06 pm
Salaan, waxaan haystaa mashiinka dharka lagu tolo ee ayeeyo-weyn ee astaanta fanaaniinta, oo la soo saaray 1888, oo leh nambarka wax soo saarka 8286996. Waa sida cusub oo xaalad aad u fiican, si fiican u shaqeysa, waxay leedahay armaajo cusub iyo daboolkeeda. ii sheeg qiimaheeda qiyaas ahaan?? Aad baad u mahadsantahay.
Maria Dolores Villalpando Munoz
Abriil 2, 2021 markay ahayd 6:11 pm
Salaamu calaykum, waxa aan hayaa mishiin duug ah oo dharka lagu tolo waana koronto, waxa kale oo uu leeyahay baalle iyo mooto yar, waxa kale oo ay calaamaddu ku xardhan tahay calaamada HOOYADA iyo weedh odhanaysa THE MEALTHY MANUFACTURING Ca. or Co. ? Ma jiraa muuqaal ama qof yaqaan sida loo shaqeeyo iyo haddii ay jiraan qaybo ama meel lagu hagaajiyo?
Abriil 16, 2021 markay ahayd 10:19 pm
Salaan, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado taariikhda mashiinka pedal Hata
Abriil 23, 2021 markay ahayd 7:19 pm
Waxaan haystaa mashiinka dharka lagu tolo ee sumadda Wohltmann waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado sanadka iyo qiimaha ay ku fadhido.
June 14, 2021 at 11:04 waxaan ahay
Si aad u ogaato sanadka wax soo saarka, ka raadi model kaaga Google waxaana hubaal ah inaad ka heli doonto tixraacyo taariikhda la soo saaray. Sida qiimaha, waa wax aan macquul aheyn in la ogaado sababtoo ah waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la falanqeeyo suuqa iyo isbarbardhigga. Waxa laga yaabaa in aanay waxba u qalmin ama waxa laga yaabaa inay ku kacdo boqolaal dollar. U fiirso marinnada gacanta labaad sida Wallapop oo waxaad heli doontaa fikrad.
6-ka May, 2021 saacaddu markay tahay 6:10 am
Hi, waxaan haystaa mishiinka tolida yar ee ku shaqeeya baytari yar oo leh ubs ama vbs sumadda, ma hubo, waa sida saddexagalka, waxaan jeclaan lahaa inaad iga caawiso inaan ogaado nooca uu yahay sababtoo ah si kasta oo adag Waxaan eegay anigu waxba ma heli karo.
June 14, 2021 at 11:03 waxaan ahay
Nasiib darro ma garanayno nooca mashiinka tolidda ee aad sheegtay.
ALVARO GARCIA CAMACHO
16-ka May, 2021 saacaddu markay tahay 7:45 pm
Maalin wanaagsan, ma jiraa qof haysta sawir mishiinka harqaanka, sumadda CADAAN ee USA, ma lix khaanad baa? Waxaan haystaa saldhigga iyo khaanadaha, waxaan rabaa in aan ogaado midabada asalka ah.
June 14, 2021 at 11:02 waxaan ahay
Ma isku dayday inaad isticmaashid raadinta sawirka google si aad u heshid ringtoneskii asalka ahaa ee mishiinka tolida hore ee aad haysato?
June 3, 2021 at 12:34 waxaan ahay
Hello waxaan haystaa mashiin duug ah oo dhar tolid ah, waa inuu jiraa 70/80 sano… waxa kaliya ee aan hagayo u haysto waa kelmad "sharafeed"
WAAN SOO CELINAYAA WAXAAN JECELAYAA INAAN OGAATO ASALKEEDII IYO TAARIIKHDIISA, MA I CAAWIN KARTAA? MAHADSANID